Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba Eziphambili zaseHawaii » Ukuthintelwa kokuhamba ukuya eHawaii iinyanga ezi-2 ezingakumbi
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • Iindaba zeMpilo • HITA • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Resorts • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Izithintelo zokuhamba eHawaii
Oku kuya kuba yimantra esemgangathweni evela kwiRhuluneli yaseHawaii uDavid Ige kubakhenkethi abacinga ngokuza kwiziqithi kwiiholide- Nceda ulibazise izicwangciso zakho zokuhamba.
NgokweRhuluneli yaseHawaii namhlanje, imigaqo yokuhamba iya kuhlala isendaweni ubuncinci ezinye iinyanga ezimbini.
IHawaii ilwa nenani eliphezulu kakhulu le-COVID-19 ngokwamatyala amatsha kunye nokufa ngenxa yokwahluka kakhulu kweDelta.
Kulabo basafikayo eHawaii, kufuneka babonise ubungqina bokugonywa okanye iziphumo ezingalunganga zovavanyo lwe-COVID kwiiyure ezingama-72 zokufika eHawaii okanye bajongane nokuvalelwa kweentsuku ezili-10.
Irhuluneli ibambe inkomfa yeendaba rhoqo ngeveki kwi Aloha Chaza, nakwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, Isibongozo sakhe besifana -Ukucela abakhenkethi ukuba balinde kude kube kamva batyelele iHawaii.
Ngoku IHawaii inemiyalelo engxamisekileyo endaweni yokulawula ukuba luqhutywa njani uhambo xa usiya eHawaii, kwaye ngeRhuluneli namhlanje, loo migaqo iya kuhlala ikho kangangezinye iinyanga ezimbini.
IHawaii ibisokoliswa ziinombolo eziphakamileyo kakhulu ze-COVID-19 ngokwamatyala amatsha kunye nokufa, konke ngenxa yokuchaphazeleka okukhulu kweDelta. Kuqhelekile ukubona ukubalwa kwamanani aphindwe kabini ngemini enye. Indawo yokugcina izidumbu eHonolulu kuye kwafuneka ibeke izikhongozeli ezi-3 ezifrijini kwipropathi ukuze kulungiselelwe inani eliphezulu lemizimba efumanekayo kunye nokugcina ezo zidlule kwi-COVID, ngoku uninzi lwazo.
Irhuluneli uIge ucacisile ukuba umndilili weentsuku ezisixhenxe zamatyala amatsha emihla le uhlala engaphezulu kwama-300. Ngelinye ixesha ngo-Agasti walo nyaka, bekukho phantse amatyala ama-19 amatsha abhalwe eHawaii ngosuku olunye.
Ukusukela ngoko, iHawaii ilawula kwinani labantu abanokuhlanganisana endaweni enye kunye nokuba bangaphi abantu abangatya kwindawo enye ngexesha elinye. Kubakhenkethi, oku kuthetha imigca emide kwiivenkile zokutyela, kwaye iindawo ezininzi ezibonelela ngokutya zikwenza oko ukulungiselela kuphela.
ULieutenant Governor waseHawaii uJosh Green, okwangugqirha we-ER, ujonge iinombolo zokulaliswa esibhedlele ngeliso lokhozi. Ngokukhawuleza uveza ukuba uninzi lwabo balaliswe esibhedlele ngoku zizigulana ze-COVID, ngabo bangagonywanga. Idatha ibonisa ukuba phantse iipesenti ezingama-90 zabo bafuna unyango esibhedlele kwi-COVID abafumananga naluphina ugonyo, kwaye loo pesenti ihlala ihambelana imihla ngemihla.
Okwangoku, ukunxiba iimaski kunyanzelekile kwiindawo zangaphakathi zikawonke-wonke, kwaye nokungena kwindawo yokutya nokuba kukutya okanye kukuchola nje, umntu makabonise ikhadi lokugonya eligcwalisiweyo ukwenza njalo.
Ngaphandle kwento yokuba iHawaii isondela kumlinganiselo wokugonywa okwe-70% ukufezekiswa kwengqondo-okwangoku kwi-68% - iRhuluneli ayisakuboni ukuwela lo mqobo njengophawu lokukhulula izithintelo. I-Delta eyahlukileyo yendalo echaphazelayo iyenza loo njongo ibalulekileyo ibe ngoku ayinamsebenzi.
Eyona nkxalabo inkulu yeyabasebenzi bezempilo kunye nezibhedlele ezolulelwe ngaphaya kweemeko eziqhelekileyo ukuya kunyaka wesibini. Abasebenzi basebenza kakhulu kwaye inani leebhedi ezikhoyo zezigulana ze-COVID kufuneka zijongwe rhoqo ukuze izibhedlele zisakwazi ukwamkela ezinye iintlobo zezigulana ezifuna ukhathalelo lonyango.
Kulabo bathatha isigqibo sokuya eHawaii, kufuneka babonise ubungqina bokugonywa okanye iziphumo ezingalunganga zovavanyo lwe-COVID ngaphakathi kweeyure ezingama-72 zokufika eHawaii okanye ukubekelwa bucala iintsuku ezili-10.
I-IceCure yezoNyango ingene kulwabiwo lokuqala ...
Ixesha lokufika eGuadalupe liyasebenza ngoko nangoko ngenxa yombango...
I-UNWTO General Assembly eMadrid ngokujikeleza ngokupheleleyo
URochelle Shankle uthi:
Oktobha 4, 2021 kwi-18: 34
"Ingqondo yomhlambi" huh? Ngaba esi sisiliphu sikaFreudian? Yiza kubahleli, sinokwenza ngcono.
Oktobha 4, 2021 kwi-06: 11
Ndingumhlali waseHawaii kwaye ngokokwazi kwam, abathengi abathatha kuphela iiodolo kwiindawo zokutyela AKUFANELE babonise ikhadi lokugonya okanye iziphumo zovavanyo ezingalunganga.
Oko kusebenza kuphela kukutya kwiindwendwe.
Ndisebenza kwivenkile yokutya kunye ne-deli kwaye ndenza i-grocery yexeshana kunye nokuhanjiswa kokutya.